मकवानपुरमा १३ हजार घर निर्माण ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
मकवानपुरमा १३ हजार घर निर्माण !
मकवानपुर जिल्लामा महाभूकम्पबाट क्षति भएका भवन संरचनामध्ये १३ हजार ७० वटा घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार मकवानपुरमा हालसम्म पहिचान भएका ३४ हजार ३०० लाभग्राहीमध्ये १३ हजार ७० वटा घर पुनःनिर्माण भइसकेको छ ।
भूकम्पले आंशिक क्षति भएका निजी आवासको प्रवलीकरण ९रेक्टोफिटिङ०ले भने गति लिन नसकेको पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिकले बताएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अव्यवाहारिक नीति र कम अनुदान रकमका कारण प्रवलीकरणले गति लिन नसकेको जनाइएको छ ।
मकवानपुरमा पूर्ण क्षति भई अनुदान सम्झौता भएकामध्ये ८२ प्रतिशतले निजी आवास भवन बनाइरहेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये हालसम्म मकवानपुरमा १३ हजार ७० जना ९४५।२१ प्रतिशत० लाभग्राहीले घर निर्माण गरिसकेको कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख सुदीप आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मकवानपुरमा कूल लाभग्राही सङ्ख्या ३४ हजार ३०९ मध्ये २७ हजार ८३४ जना अर्थात् ८० प्रतिशत लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।